Yakaderera Mutengo Franchise Yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Mutengo wakaderera Franchise
Inoratidzwa Yakaderera Mutengo Franchises
Nguva Dzakaderera Mutengo Franchises
Ne franchising inofamba pasi rese uye vanhu vatsva kuva franchisees zuva nezuva uye kuzadzisa zviroto zvavo zvinogona kuve zvinogumbura kune zvakajairika vanhu veboka rekushanda vanoshanda zvakaoma kutenga Franchise kuti vave sahwira wavo. Asi usazvidya moyo kubvira kuFranchiseek tinopa akasiyana akawanda emitengo yepasi yepasi pemari chero munhu anofarira kwazvo franchising asi asina mari yemikana inodhura yekutengesa.
Nei franchising ine yakakwirira kubudirira mwero.
Kana iwe usina ruzivo mukumhanyisa bhizinesi usati wasangana neiyo sarudzo yakanaka kwazvo nekuti inokupa mukana unoshamisa wekumhanyisa bhizinesi iro ratova rimwe zita raizivikanwa zvichienderana nekuti ndeipi yauri kutenga saka inokupa mukana wekumhanya bhizinesi pasina kutanga zvizere kubva kutanga nekuti iwe uchawana yevatengi base zvakanyanya kukurumidza kune zita idzva mutaundi.
Vari franchise zviri nyore here kumhanya?
Izvi zvese zvinoenderana nekuti mune franchising zvese zvinoenderana nemunhu. Chekutanga iwe unofanirwa kushanda sechikwata zvakanyanya kukosha neiyo franchisor yakatengesa mukana weiyo Franchise. Sezvo ma franchise mazhinji aine zvibvumirano zvekubhadhara mari dzemwedzi uno yekushandisa zita rekambani semuenzaniso. Saka kana iwe uri wakanaka timu mushandi mukana wakaderera franchise mukana unogona kukushandira zvakakwana.
Ku franchising kwakanakira hupfumi?
Franchising pamusoro pemakore apfuura munyika dzakawanda dzakasiyana dzakaratidza kunyatsobatsira hupfumi hwavo kubva kuzvinhu zvese kupa hupfumi kuhupfumi hwavo nenzira yese yekupa mikana yebasa iyo inobatsira chero hupfumi kubudirira zvakadaro. Zvakare isu tichagovana mamwe manhamba akapoteredza franchising akaunganidzwa mune dzakawanda nyika kuratidza kuti yakabatsira sei makore apfuura.
Franchising inopa mari inoita mabhiriyoni gumi neshanu kuupfumi hweUK gore rimwe nerimwe.
MuUK vanopfuura mazana manomwe ezviuru vanhu vakashandiswa kuburikidza neFrenchise.
Franchising muUSA yashanda vanhu vanopfuura mamirioni masere.
Franchising muUK yakakodzera kudzamisa madhora zviuru mazana manomwe zvemadhora emadhora.
Kune anopfuura makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri Franchise masangano muUS.
Franchising muna 2017 muSpain yakashanda vanhu vanopfuura 200,00.
Aya manhamba anoratidzei kune franchising.
Kunyangwe hazvo franchising ichibatsira vanhu kumhanyisa mabhizinesi avo, izvo zvinopa zvakaipisisa kuhupfumi hwese kubatsira vanhu vakajairwa basa kuti vabudirire nekupa mukana webasa icho chinhu chidiki chinogona kuita musiyano mukuru kune nyika kubudirira.
Saka ne franchising inokura pamwero wakakura nei usingatarise yedu yakaderera mutengo franchise mikana yekutengesa nhasi kuFranciseek? Zvakare kana usina chokwadi nezve franchising ini ndinokurudzirawo kuti utarise blog redu kuti uwane ruzivo uye nyaya dzekubudirira kubva kune vamwe vanogarisana nenyika dzese.